ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကနေတခြားကွန်ပြူတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်းသလား??? | Shwekoyantaw
Published : 3:42 AM Author : shwekoyantaw
MHF မှာ ဆွေးနွေးထားတာလေးပါ.......။ကျွန်တော်ကြိုက်လိုပို့စ်တစ်ပုဒ် အနေနဲ့ ပြန်သိမ်းထားတာ....။
ှQuestion....../ /မင်္ဂလာပါ အကိုတို့ .................................
ညီတစ်ခုလောက်သိချင်လို့ ပါ ။ ကိုယ့် Computer ကနေ တခြား Computer ကိုဘယ်လိုထိန်းတလဲသိချင်လို့ ပါ..ညီမှာ TeamViewer လဲရှိပါတယ်. ။ဒီ ဟာကို ညီသိပ်မကြိုက်လို့ ။ တခြားနည်းလေး၇ှိ၇င်ပေးပါလားဗျာ..........
Answer(1)......./ /ဟုတ်ကဲ့ ရတဲ့နည်းတွေကတော့များတယ်....
အဲဒါက Window OS မှာ တစ်ခါတည်းပါဝင်လာပြီးသားစနစ်တစ်ခုပါ
အဲဒါကတော့ Windows remote Assistance ဖြစ်ပါတယ်
ကဲ စရအောင် ........
နံပါတ် ၂ က နံပါတ် ၁ ကို ထိန်းချုပ်ချင်တယ် ဆိုပါတော့
နံပါတ် ၁ ဘက်ကနေ အခုလို ပထမဆုံအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ် ။ Programs ကနေ Windows remote Assistance ကိုခေါ်လိုက်ပါ
Windows remote Assistance ဆိုတဲ့ Box တစ်ခုကျလာတာနဲ့
Invite someone you trust to help you ကိုေ၇ွး ၊ Save this invitataion asafile ကိုထပ်ရွေး
အဲဒီဖိုင်ကို Desktop ပေါ်မှာပဲ Save လိုက်ပါ ။ Save လိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း Box တစ်ခုကျလာပါဦးမယ်
အဲဒီ Box ထဲမှာ password ပါ တစ်ခါတည်းပါဝင်လာပါမယ် ။အဲဒီ password ကိုမှတ်ထား ပြီးရင် နံပါတ် ၂ ဘက်ကနေ လုပ်မယ်
နံပါတ် ၂ ဘက်ကနေ Windows remote Assistance ကိုခေါ်လိုက်
Windows remote Assistance ဆိုတဲ့ Box တစ်ခုကျလာတာနဲ့ Help someone who has invited you ကိုရွေး ပြီးရင်
Use Easy Connect ကိုထပ်ရွေး ၊ေ၇ွးပြီးတာနဲ့ Enter the Easy Connect password ဆိုပြီး password ထည့်ခိုင်းလိမ့်မယ်
ခုနက မှတ်ထားခိုင်းတဲ့ password ကိုထည့်ပေးလိုက်
RAT နဲ့ ဆို ထိန်းနိုင်မယ်ထင်တာပဲ
Note::: RAT လုပ်မယ်ဆိုတော်တော် သတိထားရပါတယ်..tools တွေတော်တော်များများကိုက fake program တွေ
tools တွေ ဆွဲပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တောင်မှ Kaspersky က ချက်ချင်းလိုက်သတ်တယ်
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲဒီ tool တွေ မှာ malicious codes တွေ နဂိုကတည်းကပါတယ်
ကိုယ့် အရေးကြီးတဲ့ computer မှာ မစမ်းပါနဲ့
Google မှာ ရိုက်ရှာဖို့ :)
RAT ( Remote Administartion Tools )
ny4t.t33 ရေးထားတဲ့ prorat tutorial
ဒါက deepfreeze ကို hack ဖို့
credit to ==> shwekoyantaw
www.ziddu.com/download/15199708/DEEPFRE ... R.rar.html
Answer(3)......../ /ဒါလေးကောင်းတယ် ညီရေ ..
http://www.vedivi.com/support/blog/167- ... ernet.html
Rat သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Live connect ရဖို့port forward လိုပါတယ်... ဒါမှမဟုတ် FTP host / email ( need username+pass << make is with secondary account to avoid backdoor ) ကို logs အနေနဲ့ ပို့တဲ့ stealer တွေလောက်ပဲ စသုံးကြည့်ပေါ့ ....
ကိုယ်က သူများကို control လုပ်ချင်ရင်တော့ ကိုယ်က သူ့ ထက် smart ပိုဖြစ်ဖို့ တော့လိုတယ်နော့်
copy from http://mmhackforums.noonhost.com
Labels: network, RAT, tutorial |